Na izany aza, tsy nisy very ireo omby nogiazana ireo. Ireo mpiray tendro tamin'ireo dahalo lavo ihany no voalaza fa saika haka ny omby. Efa nisy moa ny famerenana ny ampahany tamin'ireo omby 329 ireo tamin'ny tompony izay niarahan'ny avy ao amin’ny fitsarana sy ny kaominina ary ny zandary taorian'ny fanadihadiana nataon'ireto farany tamin'ireo nilaza ny ho tompony. Ankehitriny dia efa nandray fepetra manokana ny eo anivon'ny kaompanian’ny zandarimariam-pirenena ao Betroka hanamafisana ny fiambenana ireo omby sisa tavela izay mbola haverina amin’ny tompony. Nanamafy avy hatrany ny hidim-bavahady ny tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina izay notarihin’ny Ben’ny tanàna tamin’ny alahady teo.